युगसम्बाद साप्ताहिक - शिवमायाको अडानले नेकपालाई दिएको चुनौति
Wednesday, 04.08.2020, 03:44am (GMT+5.5) Home Contact
शिवमायाको अडानले नेकपालाई दिएको चुनौति
Tuesday, 01.14.2020, 12:23pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र भागवण्डे राजनीतिलाई उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले चुनौति दिनुभएको छ । चार महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख पदमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्येको एकजनाको भागमा पार्नका लागि उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन दिएको निर्देशन उहाँले लत्याएर राजीनामा नदिने महाभियोग लगाएर हटाउन चुनौति दिएपछि नेकपा नेतृत्वलाएै संकट परेको छ । शनिबार नेकपा सचिवालयले शिवमायालाई राजीनामा दिन दिएको निर्देशन अस्वीकार गर्नुभएकी उहाँले आइतबार अध्यक्षद्वयकै सामुन्ने राजीनामा नदिने र जे गर्नुपर्छ गर्नुस् भन्ने जवाफ दिएपछि आइतबारलाई निर्धारित संसद बैठक समेत स्थगित भएको छ ।
शनिबार उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले आफूले राजीनामा नदिने हिम्मत भए महाभियोग लगाएर हटाउन चुनौति दिनुभएको थियो । उपसभामुख थुम्बाहाम्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने भए मात्रै राजीनामा दिने नत्र संसद बैठक चलाउने बताउँदै आउनुभएको थियो । उता नेकपा अध्यक्षहरु भने शिवमायालाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराएर अर्को व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने र उपसभामुख राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दिने तयारीमा रहेका छन् ।
आइतबार नेताद्वयले बोलाएको बैठकमा सभामुखको उम्मेदवार चयनका लागि पनि राजीनामा आवश्यक रहेको भनेर नेताहरुले सम्झाए पनि उपसभामुखले राजीनामा दिन्न भनेर हिँड्नुभएको थियो । उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सचिवालयको बैठकको निर्णयसमेत नमानेपछि आइतबार विहानै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर छलफल गर्नुभएको थियो । सो छलफलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेल पनि उपस्थित थिए । उपसभामुखलाई बोलाएरै छलफल गर्दा पनि निकास दिन नमानेपछि नेकपा नेतृत्व संकटमा परेको छ ।
नेकपाका एकथरि नेता भने उहाँलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाइएकाले पार्टीले सांसदबाट निष्काशन गर्नसक्ने बताइरहेका छन् । हुन पनि तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएमा नेकपा सामु तीनवटा विकल्पमात्र छन् । तीमध्ये पहिलो विकल्प उहाँलाई नै सभामुख बनाउने निर्णय गर्ने र राजीनामा गराउने हो । नत्र समानुपातिक सांसदको सूचीबाट उहाँको नाम हटाउन पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने ।